हवाई जहाज चढ्नासाथ मोबाइल किन फ्लाइट मोडमा राखिन्छ ? - Dhangadhi Khabar
शनिबार १६, साउन २०७८ ०८:१६
हवाई जहाजमा चढ्नासाथ मोबाइललाई एयरप्लेन वा फ्लाइट मोडमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईं हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर के तपाईंलाई थाहा छ, यस्तो बेला मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्नु किन अनिवार्य हुन्छ ? जब प्लेन हावामा टेक अफ लिन्छ, तब पाइलटलाई तल जमिनमा रहेका टावरसँग सञ्चार गर्न सिग्नल प्राप्त हुन्छ ।
जसले गर्दा पाइलटको हेडफोनमा तल ग्राउन्ड स्टेसनको कन्ट्रोल रुमको आवाजको साटो तपाईंको मोबाइलको फ्रिक्वेन्सी अवरोधले झिरझिर आवाज आउन थाल्दछ र कन्ट्रोल टावरबीचको सञ्चारलाई अवरोध गर्दै जान्छ अनि पाइलटले प्राप्त निर्देशन सुन्नै नसक्ने अवस्था आउँछ ।
यी कारणले गर्दा फोनमा एयरप्लेन मोड राखिएको हुन्छ र उडानका दौरान त्यसलाई अन गर्नुपर्ने नियम बनाइएको हो ।
मङ्गलबार ०१, असार २०७८ १२:१६ मा प्रकाशित